मेसीले किन छाड्दै छन् बार्सिलोना ? | सबै खेल
मेसीले किन छाड्दै छन् बार्सिलोना ?
१९ असार २०७७, शुक्रबार २२:४४
अर्जेन्टाइन सुपरस्टार तथा बार्सिलना कप्तान लियोनल मेसी अहिले चर्चामा छन् । क्लब छाड्न चाहेको बताएपछि वर्तमान समयका उत्कृष्ट खेलाडी मेसी चर्चामा आएका हुन् ।
बार्सिलोना क्लब इतिहासकै उत्कृष्ट खेलाडी मेसी र क्लब व्यवस्थापन तथा कोचिङ स्टाफको सम्बन्ध पछिल्लो समय राम्रो छैन । सोही कारण मेसीले बार्सिलोना छाड्ने मनस्थिति बनाएका हुन् ।
बार्सिलोनासँग मेसीको सम्झौता सन् २०२१को जुनमा सकिँदै छ । अब मेसी बार्सिलोनासँगको सम्झौता नवीरकण गर्ने पक्षमा नरहेको स्पेनिस रेडियो कादेनासेरले जनाएको छ । पछिल्लो समय खेलाडी चयनमा दबाब दिने गरेको आरोप मेसी माथि लाग्दै आएको छ । सो आरोप व्यापक बन्न थालेपछि मेसी बार्सिलोना छाड्ने मनसायमा पुगेको बताइएको छ ।
‘ड्रेसिङ रुममा आफ्ना मिल्ने साथीहरुसँग आफू क्लबको समस्या बन्न नचाहेको बताएका छन्’, स्पेनिस रेडियो कादेनासेरले लखेको छ, ‘क्लबले चाहे उनी यहीँ करिअर सकाउन चाहन्छन्, तर क्लबको बोझ भएर होइन ।’
अघिल्लो साता सेल्टाभिगोविरुद्धको खेलको ‘कुलिङ ब्रके’मा मेसीले प्रशिक्षक सटिन र साहायक प्रशिक्षक इडर सारबियालाई वेवास्ता गरेका थिए । त्यसपछि नै मेसी र कोचिङ स्टाफबीच सम्बन्ध राम्रो नरहेको सहतमा आएको थियो ।
बार्सिलोना २–२ गोलको बराबरीमा रोकिएको सो खेलमा खेलाडी परिवर्तनको विषयमा मेसीसहित बार्सिलोनाका खेलाडी र प्रशिक्षक सेटिनबीच विवाद भएको थियो । सो खेलमा सेटिनले दोस्रो हाफमा रुगी पुचको स्थानमा आर्थुर मेलो र दुवै गोल गरेका सुआरेजको स्थानमा एन्टोइन ग्रिजम्यानलाई मैदान छिराएका थिए ।
क्लब व्यवस्थापन र कोचिङ स्टाफको पछिल्लो व्यवहारप्रति खुसी नभएको बताइएको छ । पछिल्लो सयम बार्सिलोनाको खराब प्रदर्शनको सम्पूर्ण दोष आफूमाथि लाग्न थालेपछि मेसी क्लबसँगको सम्झौता नवीकरण नगर्ने पक्षमा पुगेका थिए ।
मेसीले केही समयअघि मात्र बार्सिलोनासँगको सम्झौता एकवर्ष थप गरेका थिए । उनको सझौता यही जुनमा सकिँदै थियो । त्यहीवेला पनि मेसी सम्झौता नवीकरण गर्ने पक्षमा थिएनन्, तर बार्सिलोना खेल निर्देशक तथा पूर्व सहकर्मीको इरिक अविदले अथक प्रयासपछि मेसीले गत फेब्रुअरीमा सम्झौता नवीकरण गरेका थिए ।
मेसीले क्लब छाड्ने चर्चा चलेपछि क्लब पदाधिकारीहरु मेसीलाई क्लबमै राख्न प्रयास थालेका छन् । यो विषयमा बार्सिलोनाले मेसीको बाबुसँग कुरा गरिरहेको बताइएको छ । फ्यान र समर्थकले पनि मेसीले बार्सिलोनामै राख्न दबाब दिन थालेका छन् ।
बार्सा छाडे कहाँ जान्छन् मेसी ?
मेसी बार्सिलोनाकै एकेडेमीका उत्पादन हुन् । बार्सिलोनालाई अहिलेको उचाईमा पु¥याउन उनको योगदान अह्म छ । क्लब व्यवस्थापनसँग सम्बन्ध चिसिँदै गएपछि मेसी क्लब छाड्ने तयारीमा पुगेका छन् । मेसीले बार्सिलोना छाडे कहाँ जान्छन् ? सबैले चासोका साथ हेरेका छन् ।
विश्वकै उत्कृष्ट खेलाडी मेसीलाई भित्र्याउन युरोपका धेरै क्लब लाग्ने निश्चित छ । तर, उनी इंग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर सिटी जाने सम्भावना अधिक छ, किनभने मेसीको सबैभन्दा प्रिय प्रशिक्षक पेप ग्वार्डिओला सिटीमा छन् । यस्तै एन्टेनियो कोन्टोको प्रशिक्षणमा रहेको इन्टर मिलान पनि मेसीलाई अनुबन्धन गर्न चाहान्छ । अघिल्लो सिजन नै इन्टरले मेसीले भित्र्याउन इच्छा देखाएको थियो ।
युरोपका ठूला क्लब नभई मेसी आफ्नो बाल्यकालको क्लब ‘नेविल्स वल्र्ड बोइज’ पनि फर्कन सक्ने छन् । मेसीले पटक पटक आफू पुनः नेविल्सबाट खेल्न चाहेको बताउँदै आएका छन् । बार्सिलोना आउनुअघि ६ वर्षको उमेरमा मेसीले नेविल्सबाट खेलेका थिए ।
कतिपयले के पनि भनिरहेका छन् भने मेसीले बार्सिलोना छाडेसँगै आफ्नो फुटबल करिअर टुंग्याउने छन् । ३३ वर्षीय मेसी पछिल्लो समय खेल खस्किएको छ, र उनी मैदानमा केही थकित देखिन थालेका छन् । त्यसैले मेसीले बार्सिलोना छाड्दै आफ्नो फुटबल करिअर पनि टुंग्याउन अड्कल सही पनि हुन्छसक्छ । तर, उनका समर्थक सन् २०२२ को कतार विश्वकपसम्म मेसीलाई मैदानमा देख्न चाहन्छन् र, उनले विश्वकप उपाधि उचालेको हेर्न चान्छन् ।
रियलका हाकिमी इन्टर लागे
साने बायर्नमा आबद्ध
साफ च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि नेपालले भारतसँग खेल्ने
२८ आश्विन २०७८, बिहीबार ०७:१६
पहिलो पटक साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल पुग्ने नेपाली टिमलाई प्रधानमन्त्रीले दिए बधाई
२७ आश्विन २०७८, बुधबार २२:००
अल्मुताइरीले साफपछि राष्ट्रिय टिम छाड्ने
२७ आश्विन २०७८, बुधबार २१:४४
अन्जनको गोलमा नेपाल पहिलो पटक साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा
२७ आश्विन २०७८, बुधबार २१:३३
सुरुआतमै नेपाल बंगलादेशसँग १-०ले पछि
२७ आश्विन २०७८, बुधबार १७:०९
बंगलादेशविरुद्ध खेल्ने यस्तो छ नेपाली टिम, नवयुग, आयुष र अन्जन पहिलो रोजाइमा
२७ आश्विन २०७८, बुधबार १६:५०